Sidee si ay u dukaameystaan ​​online si nabad ah | USAHello The | USAHello
waa ay adag tahay si aad u hesho dukaanka a? Ha aad qabto dhibaatooyin afka marka aad dukaanka? In USA, waxaad ka iibsan kartaa ku dhawaad ​​wax kasta oo aad u baahan tahay online. Baro sida loo isticmaalo internetka si ay u dukaameystaan ​​online cunto iyo waxyaabaha kale ee maalin walba. Baro sida loo noqon ammaan inta aad internetka alaab.
Sidee si ay u dukaameystaan ​​online waayo, waxyaalaha aad rabto in aad
Waxaad ka raadsan kartaa internet-ka oo la magaca shayga aad rabto in aad soo iibsato. Laakiin waxaad la kulmi kara on site nabadla '. halkii, bartaan kuwaas oo ah websites ammaan ah oo u isticmaali. sida caadiga ah aad ku kalsoon karaa magacyada ugu caansan iyo websites caan. Laakiin waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad isticmaasho website-ka yar oo loo yaqaan sababta oo ah waxay leeyihiin cuntooyinka gaarka ah. Sidaas, ka hor inta aadan bixin wax website cusub, eegtaa haddii website tahay mid nabdoon.
Waxaad ka heli kartaa haddii website a shopping waa ammaan baadhi online. Ku qor magaca website-ka, ka dibna ereyga "dib u eegista." Waxaad ka akhrisan kartaa oo ku saabsan waxa dadka kale ee ka fikirto website in.
Sida loo bixiyo marka aad dukaanka online
Haddii aad qabto kaarka deynta ama kaarka debit ah, waxaa fudud si ay u iibsadaan online. Waa ammaan in la isticmaalo credit card badan kaarka debit ah. kaararka deynta waxaa xiran oo aan lacagta ee xisaabtaada bangiga. Haddii tirada kaarka la xado, tuug ma ka heli kartaa xisaabtaada bangiga.
Haddii aadan haysan kaarka deynta ah, waxaad weli u iibsan kartaa online. Waxaad isticmaali kartaa kaadhka wicitaanka. Waxaad ka iibsan kartaa kaarka in uu leeyahay tiro sida credit card. Waxaa qadar go'an oo lacag ah oo ku saabsan kaarka. Waxaad ku dari kartaa lacag dheeraad ah ama aad u hesho kaar cusub marka lacagta egyahay. Tani waa hab aad u amaan ah si ay u iibsadaan online maxaa yeelay, uma baahnid inaad si loo siiyo macluumaad kasta oo dhaqaale shakhsi marka aad bixiso wax. Waxaad bixin doontaa lacag marka aad iibsato ama lacag ku riday. ajuurada barbardhig ku kala duwan si aad u hesho heshiiska ugu wanaagsan. Raadi talinayaa kaararka qaddimaa ka Consumer Reports.org.
Waad awoodaa furatid xisaab Paypal a iyo bixin online waxaa ka. Waxaad u baahan tahay xisaab bangi ama credit card si online iibsan leh account Paypal joogto ah. Or, waxaad ka heli kartaa Paypal lasii Mastercard oo aan xisaab bangi.
Helitaanka iyo laabtay alaabta
Adeeganayso internetka ku haboon, sababtoo ah wax walba oo loo soo diray in ay gurigaaga. Aad leedahay si taxaddar, sababtoo ah aadan helin si ay u tijaabiso sheyga marka aad iibsanayso. Hubi ka hor inta aadan iibsan in aad u soo celin kartaa haddii aad xajisaan rasiidka iyo baakadaha asalka ah oo aan loo isticmaali shayga. Sidoo kale, hubi inay arkaan wixii siyaasad laabashada waa. websites qaarkood waxay bixiyaan celinta free, halka qaar kalena ay ka dhigi doonaa inaad bixiso maraakiibta.
Sidee si ay u dukaameystaan ​​online si nabad ah
Your macluumaadkaaga shakhsiyeed waxaa mararka qaarkood loo yaqaan data. Waxaad marnaba u baahan tahay in la siiyo baxay xogta shakhsiga muhiim ah, sida tirada ID, lambarada bankiga, passwords, ama cinwaankaaga goobaha warbaahinta bulshada. Si aad u badbaaddo dadka isticmaala ay, shabakadaha bulshada leeyihiin goobaha gaarka ah oo aad u isticmaali karto si aad macluumaad (data) ammaan.
Eeg xagga sare ee boggan at URL (cinwaanka bogga bilowda ka https://). Waxaad arki doontaa wax a calaamad padlock yar ee soo socda cinwaanka. Marka aad on site shopping ah, fiiri si aad u aragto in magaca goobta ayaa padlock soo socda in ay. Hubi in cinwaanka goobta URL ee ku bilaabmaa "https", halkii kaliya "http", iyo leedahay icon padlock duurka URL ah. Tani waxay muujinaysaa in website-ka waa aamin iyo isticmaalaa encryption in la harjadayaan xogta aad sidaa daraadeed waxa aan dhexda uga dhici karaan dadka kale. Sidoo kale, ahaan ugu jirnaa ee websites in ay leeyihiin dhexfakadaan ama naxwaha xun ee cinwaanada ay. Waxay noqon karaan copycats of websites sharci ah.
Waa ammaan si ay u dukaameystaan ​​on your computer u gaar ah. kombiyuutarada la wadaago, sida maktabadda a, laga yaabaa in ay leeyihiin virus ah in aanad garanayn oo ku saabsan. Waxaad sidoo kale laga yaabaa in soo socda la fadhiyey in ay dad kale oo arko macluumaadkaaga shakhsiyeed. Haddii aad u baahan tahay si ay u dukaameystaan ​​on computer la wadaago, hubiyo in qofna waxaa aad daawashada halka aad wax ka iibsan. Hubso in aad gasho ka mid ah xisaabtaada ka hor inta aadan iska socdaan. Haddii aadan, qof laga yaabo inay xadaan macluumaadkaaga.
MacAfee ee 10 Talooyin si ammaan online
Talooyin PC Mag ee shopping online ammaan